အိုရှန်းနီးယားရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤသည်မှာ ပထဝီဝင်ဒေသအပိုင်းအခြားအရ သမုဒ္ဒပိုင်းဇုံတွင် ကျရောက်နေသော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာရေပြင်အများစုရှိပြီးနှင့် တိုက်ကြီးများ၏ ကျောက်လွှာများစွာတွင် လွှမ်းခြုံတည်ရှိနေသော်လည်း အိုရှန်းနီးယားနိုင်ငံများသည် တိုက်ကြီးများ၏ စာရင်းတွင် ရံဖန်ရံခါသာ ဖော်ပြကြသည်။
ထိုစာရင်းတွင် ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ ပစိတ်ဖိတ်သမုဒ္ဒရာဝန်းရံထားသော ဩစတြေးလေးရှား၊ မီလန်နီးရှား၊ မိုက်ခရိုနီးရှားနှင့် ပိုလီနီးရှားတို့ ပါဝင်ကြသည်။ အိုရှန်းနီးယားဒေသ၏ ကုန်မြေထုအကြီးဆုံးပိုင်ဆိုင်သည်မှာ ဩစတေးလျနိုင်ငံဖြစ်သည်။
အာရှနှင့် အိုးရှန်းနီးယားအကြား နယ်နိမိတ်သည် ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပေ။ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များအတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ အင်ဒိုနီးယားနှင့် ပါပူအာနယူးဂီနီ၏ ဒေသနှစ်ခုအကြားကို နယ်ကြားမျဉ်းအဖြစ် မှတ်ယူသည်။ ပါပူအာနယူးဂီနီအား အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းအဖြစ် အာရှနိုင်ငံအဖြစ် တခါတရံ ထည်သွင်းကြသော်လည်း ဤသည်မှာ ရှားပါးလှပါပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် အိုရှန်းနီးယား၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် လက်ခံထားကြသည်။ ပထဝီဝင်အရ ပါပူအာနှင့် အနောက်ပါပူအာပြည်နယ်တို့သည်လည်း အိုရှန်းနီးယား၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်ကြသည်။
၁.၂ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သော နိုင်ငံများ
၂ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မဟုတ်သော နယ်မြေများ
ဤအပိုင်းတွင် ပါဝင်သော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများသည် အိုရှန်းနီးယားတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင်များလည်း ဖြစ်ကြသည်။ ဤနိုင်ငံများအားလုံးသည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကျွန်းများဖိုရမ်အား အဖွဲ့ဝင်များလည်း ဖြစ်ကြသည်။
လက်ရုံးတံဆိပ်များ / နိုင်ငံတော်အမှတ်တံဆိပ်
မြန်မာဘာသာဖြင့် စီထားသော အမည်နှင့် တရားဝင်အမည်များ
ဒေသတွင်း အတိုကောတ်အမည်နှင့် တရားဝင်အမည်
ကီရီဘတ်စ် သမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Kiribati — Republic of Kiribati
တမ်းပလိတ်:Lang-gil South Tarawa
Bairiki ၁၀၁,၉၉၈ 0000811 !၈၁၁ km2 (၃၁၃ sq mi)
လွတ်လပ်သော ဆမိုးအားနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Samoa — Independent State of Samoa
တမ်းပလိတ်:Lang-sm Apia ၁၉၄,၃၂၀ 0002831 !၂,၈၃၁ km2 (၁,၀၉၃ sq mi)
ဆော်လမွန်အိုင်းလန်းနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Solomon Islands Honiara ၅၈၄,၅၇၈ 0028896 !၂၈,၈၉၆ km2 (၁၁,၁၅၇ sq mi)
တုံဂါ ဘုရင့်နိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Tonga — Kingdom of Tonga
တမ်းပလိတ်:Lang-to Nukuʻalofa ၁၀၆,၁၄၆ 0000747 !၇၄၇ km2 (၂၈၈ sq mi)
တူဗားလူနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Tuvalu
တမ်းပလိတ်:Lang-tvl Funafuti ၁၀,၆၁၉ 0000026 !၂၆ km2 (၁၀ sq mi)
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ[note ၁] အင်္ဂလိပ်: New Zealand
တမ်းပလိတ်:Lang-mi ဝယ်လင်တန်မြို့ ၄,၅၇၀,၀၃၈ 0267710 !၂၆၇,၇၁၀ km2 (၁၀၃,၃၆၃ sq mi)
နအူရူး သမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Nauru — Republic of Nauru
အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများသည် ယာရန်ခရိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ 9,378 0000021 !၂၁ km2 (၈ sq mi)
ပလောင်း သမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Palau — Republic of Palau
တမ်းပလိတ်:Lang-pau Ngerulmud ၂၁,၀၃၂ 0000459 !၄၅၉ km2 (၁၇၇ sq mi)
လွတ်လပ်သော ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Papua New Guinea — Independent State of Papua New Guinea
တမ်းပလိတ်:Lang-tpi Port Moresby ၆,၃၁၀,၁၂၉ 0462840 !၄၆၂,၈၄၀ km2 (၁၇၈,၇၀၄ sq mi)
ဖီဂျီသမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Fiji — Republic of Fiji
Fiji Hindi फीजी/Fiji - रिपब्लिक ऑफ फीजी/ Ripablik ăph Phījī Suva ၈၉၀,၀၅၇ 0018275 !၁၈,၂၇၄ km2 (၇,၀၅၆ sq mi)
ဗနွားတူ သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-bi
အင်္ဂလိပ်: Vanuatu — Republic of Vanuatu
ပြင်သစ်: Vanuatu — République de Vanuatu Port Vila ၂၅၆,၁၅၅ 0012189 !၁၂,၁၈၉ km2 (၄,၇၀၆ sq mi)
မာရှယ်အိုင်းလန်း သမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Marshall Islands — Republic of the Marshall Islands
တမ်းပလိတ်:Lang-mh Majuro ၆၈,၄၈၀ 0000181 !၁၈၁ km2 (၇၀ sq mi)
မိုက်ခရိုနီးရှား ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု အင်္ဂလိပ်: Federated States of Micronesia Palikir ၁၀၆,၄၈၇ 0000702 !၇၀၂ km2 (၂၇၁ sq mi)
ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Australia — Commonwealth of Australia Canberra ၂၃,၂၆၈,၃၁၉ 7741220 !၇,၇၄၁,၂၂၀ km2 (၂,၉၈၈,၉၀၂ sq mi)
ကွတ်ကျွန်းစုနှင့် နျူးအေးနိုင်ငံတို့သည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံနှင့် လွတ်လပ်စွာဆက်နွယ်သော(Free Association) နိုင်ငံနှစ်ခုဖြစ်သည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံရေးအရဖြစ်စေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအရဖြစ်စေ နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ထိုနိုင်ငံနှစ်ခုလုံးသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ အထူးအဖွဲ့အစည်းများတွင် အရ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့၏ အမည်နာမအောက်တွင် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် လွတ်လပ်စွာ သံတမန်ဆက်ဆံမှုများ ပြုလုပ်ထားသည်။ နိုင်ငံနှစ်ခုလုံးသည် ပစိတ်ဖိတ်သမုဒ္ဒရာကျွန်းများဖိုရမ်၏ တင်းပြည့်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော သွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့် ထိုနိုင်ငံတို့ကို De facto အခြေအနေရှိသော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံများအဖြစ် မှတ်ယူကြသည်။
လက်ရုံးတံဆိပ် / နိုင်ငံတော်တံဆိပ်
မြန်မာဘာသာဖြင့် အမည်တိုနှင့် တရားဝင်အမည်များ
ဒေသတွင်း အမည်တိုနှင့် တရားဝင်အမည်များ
ကွတ်ကျွန်းစု Self-governing in free association with New Zealand. It sharesahead of state with New Zealand as well as having shared citizenship|New Zealand nationality law|shared citizenship, but is independent in its internal affairs. အင်္ဂလိပ်: Cook Islands
တမ်းပလိတ်:Lang-rar Avarua ၁၁,၁၂၄ 00236 !၂၃၆ km2 (၉၁ sq mi)
နျူးအေးနိုင်ငံ Self-governing in free association with New Zealand. It sharesahead of state with New Zealand as well as having shared citizenship|New Zealand nationality law|shared citizenship, but is independent in its internal affairs. တမ်းပလိတ်:Lang-niu
အင်္ဂလိပ်: Niue Alofi ၁,၃၁၁ 00260 !၂၆၀ km2 (၁၀၀ sq mi)
အောက်ပါစာရင်းအတွင်းရှိ နိုင်ငံများသည် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရင်းများမှ အကြောင်းအချက်တစ်ခုကြောင့်သာ အိုရှန်းနီးယားအတွင်း ပါဝင်သော နိုင်ငံများဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်ဒေသသည် ထိုနိုင်ငံ၏ အဓိကတည်ရှိရာ ပင်မနေရာ၏ အပြင်ဘက်(ဝေးကွာစွာ)တည်ရှိခြင်း၊
အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခွဲထုတ်၍မရသော ဖက်ဒရယ်ဆက်နွယ်ချက်ထက်ပိုသော ပုံစံရှိသည် နယ်မြေများဖြစ်ပြီး ဤနေရာတွင် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ၏ ကုန်းမြေထု၏ သိသာထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းသည် အိုရှန်းနီးယား၏ အပြင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည် သို့မဟုတ် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ၏ ပင်မနယ်မြေ၏ အပြင်ဘက်၌ တည်ရှိနေသော နယ်မြေဖြစ်သည်။ ထိုနယ်မြေအများစုကို တခါတရံ၌ အမှီအခိုနယ်မြေများ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများအဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။
ဤစာရင်းတွင်ပါရှိသော နယ်မြေ ၂ ခု(ပြင်သစ် ပိုလီနီးရှားနှင့် နယူးကာလီဒိုနီးရှား)မှာ ပစိဖိတ်ကျွန်းများဖိုရမ်၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြပြီး အခြားသော ၅ နိုင်ငံ(အမေရိကန်ဆမိုအာ၊ ဂူအမ်း၊ မြောက် မာရီယာနာကျွန်းစု၊ တိုကဲလူကျွန်းနှင့် ဝဲလစ်နှင့်ဖကျူနာကျွန်း)မှာ လေ့လာသူအဖြစ်ဖြင့် ထိုအဖွဲ့နှင့်ဆက်နွယ်၍ နေပါသည်။
Territory of American Samoa Insular area of the United States အင်္ဂလိပ်: American Samoa — Territory of American Samoa
တမ်းပလိတ်:Lang-sm Pago Pago 67,242 00199 !၁၉၉ km2 (၇၇ sq mi)
Territory of Ashmore and Cartier Islands Territory of Australia အင်္ဂလိပ်: Ashmore and Cartier Islands Uninhabited Uninhabited 00005 !၅ km2 (၂ sq mi)
Baker Island United States Minor Outlying Island အင်္ဂလိပ်: Baker Island Uninhabited Uninhabited 00129.1 !၁၂၉.၁ km2 (၄၉.၈ sq mi)
Coral Sea Islands Territory Territory of Australia အင်္ဂလိပ်: Coral Sea Islands — Coral Sea Islands Territory Uninhabited Uninhabited 00003 !၃ km2 (၁ sq mi)
Easter Island Special territory of Chile စပိန်: Isla de Pascua
တမ်းပလိတ်:Lang-rap Hanga Roa 6,148 00163.6 !၁၆၃.၆ km2 (၆၃ sq mi)
Galápagos Islands Special territory of Ecuador စပိန်: Islas Galápagos Puerto Baquerizo Moreno 35,000 07880 !၇,၈၈၀ km2 (၃,၀၄၂ sq mi)
Overseas Lands of French Polynesia Overseas country of France ပြင်သစ်: Polynésie française — Pays d'outre-mer de la Polynesie Francaise Papeete 294,935 04167 !၄,၁၆၇ km2 (၁,၆၀၉ sq mi)
Territory of Guam Unincorporated organized territory, and Insular area of the United States အင်္ဂလိပ်: Guam — Territory of Guam
တမ်းပလိတ်:Lang-ch Hagåtña / Agaña 183,286 00544 !၅၄၄ km2 (၂၁၀ sq mi)
State of Hawaii State of the United States အင်္ဂလိပ်: Hawaii — State of Hawaii
တမ်းပလိတ်:Lang-haw Honolulu 1,404,054 28311 !၂၈,၃၁၁ km2 (၁၀,၉၃၁ sq mi)
Howland Island United States Minor Outlying Island အင်္ဂလိပ်: Howland Island Uninhabited Uninhabited 00138.6 !၁၃၈.၆ km2 (၅၃.၅ sq mi)
Jarvis Island United States Minor Outlying Island အင်္ဂလိပ်: Jarvis Island Uninhabited Uninhabited 00152 !၁၅၂ km2 (၅၉ sq mi)
Johnston Atoll United States Minor Outlying Island အင်္ဂလိပ်: Johnston Atoll Uninhabited Uninhabited 00276.6 !၂၇၆.၆ km2 (၁၀၆.၈ sq mi)
Kingman Reef United States Minor Outlying Island အင်္ဂလိပ်: Kingman Reef Uninhabited Uninhabited 01958.01 !၁,၉၅၈.၀၁ km2 (၇၅၅.၉၉ sq mi)
Midway Atoll United States Minor Outlying Island အင်္ဂလိပ်: Midway Islands Uninhabited Uninhabited 02355.2 !၂,၃၅၅.၂ km2 (၉၀၉.၃ sq mi)
Territory of New Caledonia and Dependencies Sui generis collectivity of France ပြင်သစ်: Nouvelle-Calédonie — Territoire des Nouvelle-Caledonie et Dependances Nouméa 256,275 18575 !၁၈,၅၇၅ km2 (၇,၁၇၂ sq mi)
Territory of Norfolk Island Self-governing integral Territory of Australia အင်္ဂလိပ်: Norfolk Island — Territory of Norfolk Island
Norfuk: Teratri of Norf'k Ailen Kingston 2,169 00036 !၃၆ km2 (၁၄ sq mi)
Commonwealth of the Northern Mariana Islands Commonwealth, and Insular area of the United States အင်္ဂလိပ်: Northern Mariana Islands — Commonwealth of the Northern Mariana Islands
တမ်းပလိတ်:Lang-ch Saipan 46,050 00464 !၄၆၄ km2 (၁၇၉ sq mi)
Ogasawara Village Part of Ogasawara Village in Tokyo, Japan Bonin Islands: ဂျပန်: 小笠原群島 (Ogasawara Islands)
Marcus Island: ဂျပန်: 南鳥島 (Minamitorishima)
Nishino-shima Island: ဂျပန်: 西之島 (Western Island)
Okinotori Islands: ဂျပန်: 沖ノ鳥島 (Okinotorishima)
Volcano Islands: ဂျပန်: 火山列島 (Kazan Rettō) Ōmura (大村) 2,871 104.35 !၁၀၄.၃၅ km2 (၄၀ sq mi)
Palmyra Atoll United States Minor Outlying Island အင်္ဂလိပ်: Palmyra Atoll Uninhabited Uninhabited 00012 !၁၂ km2 (၅ sq mi)
Papua Province Province of Indonesia အင်ဒိုနီးရှား: Papua Jayapura 3,486,432 319036.05 !၃၁၉,၀၃၆.၀၅ km2 (၁၂၃,၁၈၁ sq mi)
Pitcairn Group of Islands British overseas territory အင်္ဂလိပ်: Pitcairn Islands — Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands
Pitkern: Pitkern Ailen Adamstown 48 00047 !၄၇ km2 (၁၈ sq mi)
Tokelau Dependent territory of New Zealand တမ်းပလိတ်:Lang-tkl
အင်္ဂလိပ်: Tokelau Each Atoll has its own administrative centre 1,384 00012 !၁၂ km2 (၅ sq mi)
Wake Island United States Minor Outlying Island အင်္ဂလိပ်: Wake Island Uninhabited Uninhabited 00006.5 !၆.၅ km2 (၂.၅ sq mi)
Territory of the Wallis and Futuna Islands Overseas collectivity of France ပြင်သစ်: Wallis et Futuna — Territoire des Iles Wallis et Futuna Mata-Utu 15,398 00142 !၁၄၂ km2 (၅၅ sq mi)
West Papua Province Province of Indonesia အင်ဒိုနီးရှား: Papua Barat Manokwari 760,855 140375.62 !၁၄၀,၃၇၅.၆၂ km2 (၅၄,၁၉၉ sq mi)
↑ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည် အန္တာတိကတိုက်တွင် ရိုစ့်အမှီအခိုနယ်မြေဟုခေါ်သည့် နယ်မြေအားပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြေညာထားသည်။
↑ Archived copy။ 2003-08-20 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Archived copy။ 2010-07-24 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ United Nations Member States။ United Nations။ ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Member Countries။ Pacific Islands Forum Secretariat။ ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ ၅.၄ ၅.၅ ၅.၆ ၅.၇ ၅.၈ Field Listing :: Names။ CIA။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ UNGEGN List of Country Names။ United Nations Group of Experts on Geographical Names (2007)။ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀၀ ၇.၀၁ ၇.၀၂ ၇.၀၃ ၇.၀၄ ၇.၀၅ ၇.၀၆ ၇.၀၇ ၇.၀၈ ၇.၀၉ ၇.၁၀ ၇.၁၁ ၇.၁၂ ၇.၁၃ ၇.၁၄ ၇.၁၅ ၇.၁၆ ၇.၁၇ ၇.၁၈ ၇.၁၉ ၇.၂၀ List of countries, territories and currencies။ Europa (9 August 2011)။ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀၀ ၈.၀၁ ၈.၀၂ ၈.၀၃ ၈.၀၄ ၈.၀၅ ၈.၀၆ ၈.၀၇ ၈.၀၈ ၈.၀၉ ၈.၁၀ ၈.၁၁ Field Listing :: Capital။ CIA။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UNGEGN World Geographical Names။ United Nations Group of Experts on Geographical Names (29 July 2011)။ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀၀ ၁၀.၀၁ ၁၀.၀၂ ၁၀.၀၃ ၁၀.၀၄ ၁၀.၀၅ ၁၀.၀၆ ၁၀.၀၇ ၁၀.၀၈ ၁၀.၀၉ ၁၀.၁၀ ၁၀.၁၁ ၁၀.၁၂ ၁၀.၁၃ Country Comparison :: Population။ CIA (July 2012)။ 27 September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ Field Listing :: Area။ CIA။ 31 January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ COMUNAS: ACTUALIZACIÓN POBLACIÓN 2002-2012 Y PROYECCIONES 2013-2020 (in Spanish)။ National Statistics Institute။ 20 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Guam။ CIA။3December 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ 管内概要｜小笠原支庁 Archived 2017-07-24 at the Wayback Machine. (in Japanese).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုရှန်းနီးယားရှိ_အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့်_အမှီအခိုနယ်မြေများ_စာရင်း&oldid=727211" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။